Ligin’ny baolina kitra Amoron’i Mania Hanomboka amin’ny janoary 2019 ny taom-pilalaovana vaovao
Nanatanteraka fivoriana nanaovan’izy ireo tatitra ny taom-pilalaovana 2018 avy ny seksiona 3 sy ny ligin’ny baolina kitra any Amoron’i Mania tamin’ny faran’ny volana novambra lasa teo ary nahafantarana fa samy tontosa hatramin’ny farany avokoa ny fiadiana ny tompondakan’izy ireo tsirairay avy.
Notapahina nandritra an’io fivoriana io fa hanomboka amin’ny volana janoary sy hitohy ny febroary 2019 ny taom-pilalaovana 2019 any amin’ity ligim-paritry ny baolina kitra ity. Ekipa 10 nozaraina ho vondrona 2 no hiatrika ny fifaninanana ka ny roa voalohany amin’ireo vondrona no hihaona eo amin’ny lalao famaranana hahitana izay ekipa hisolotena an’ity ligy ity any amin’ny fifaninanam-pirenena. Nomarihan’ny filohan’ny ligin’ny baolina kitran’Amoron’i Mania, Randriantsoaniaina Nirilanto « Dona », fa ho ao Ambositra avokoa no hanatanterahana an’ireo lalao amin’ity fiadiana ho tompondakany ity ka hisy ny fanamboaran’izy tenany ny kianjan’Akonabe amin’ny herin’ny tenany nefa tsy hosakanana ny fanampiana hataon’ireo malalatanana fa kianja hampiasain’ny rehetra amin’ny lafiny rehetra ity Akonabe, hoy izy. Nisy fanolorana fitaovam-panatanjahantena nomen’ity filohan’ny ligy ity ho an’ireo seksiona 3 ireo toy ny baolina, Jeux de maillots, tableau de remplacement, sifflet sns… tamin’ny famaranana ny fotoana.